Etihad Airways inowedzera Verified to Fly kufamba gwaro chirongwa pasi rose
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UAE Kuputsa Nhau » Etihad Airways inowedzera Verified to Fly kufamba gwaro chirongwa pasi rose
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Miedzo yekutanga yakaratidza kuti Verified kune Vanobhururuka Vashanyi vakaona yavo yekugadzirisa nguva padhesiki rekutarisa rakapotsa kuita hafu uye avhareji nguva yekumira yevashanyi vese yakaderedzwa.
Vafambi vakavimbiswa vanonakidzwa nekukurumidza track-kupinda munhandare yendege kuburikidza neyakavimbika Verified kuFly tafura yeiyo inokurumidza uye inotsvedza chiitiko.
Yakatangwa pakutanga kwaJune, Verified to Fly yakaratidza chishandiso chakabudirira kubatsira vanhu kuti vadzokere kunzira.
Vese vatyairi veEtihad vanokurudzirwa kushanyira Manage yangu Booking kuti vaendese magwaro avo.
Etihad Airways yakawedzera chirongwa che 'Verified To Fly' chekufambisa, ichigonesa vafambi kugadzirisa magwaro avo ekufambisa eCovid-19 vasati vasvika kunhandare yendege, kumigwagwa inopfuura nepasi rese.
Inowanikwa kune yakawanda ye Etihad Airways nendege, kushandisa Verified kune Fly sevhisi sevhoni kusaina-kumusoro nekushanya Manage yangu Kuverenga uye nekutevera rairo dziri nyore kurodha uye kuendesa magwaro avo ekufambisa. Vashanyi vanogashira kusimbiswa kana magwaro avo abvumidzwa zvinoenderana nezvinodiwa nehurumende uye vanogona kuenda kunhandare nechivimbo nerunyararo rwepfungwa, vachiziva kuti vaita zvese zvakakosha vasati vatiza.
Nezviri kunze kwenzira, vafambi vakasimbiswa vanonakidzwa nekukurumidza track-yekupinda munhandare yendege kuburikidza neyakavimbika Verified kune Fly tafura kuti ive nekukurumidza uye kutsetseka chiitiko. Miedzo yekutanga yakaratidza kuti Verified kune Vanobhururuka Vashanyi vakaona nguva yavo yekugadzirisa padhesiki rekutarisa rakapotsa kuita hafu uye nguva yepakati yekumira yevashanyi vese yakaderedzwa - kubatsira kumhanyisa nzendo nekuchengetedza kushamwaridzana kwevanhu panhandare.
Yakatangwa kutanga kwaJune, Verified to Fly yakaratidza chishandiso chakabudirira kubatsira vanhu kuti vadzokere pakufamba, zvichipa vafambi chivimbo chekuti vane magwaro akakodzera kuti vasangane nemitemo yehurumende yekufambisa inoenderana neCOBV kuti vabvumirwe kubhururuka. Chinhu chakakosha kubatsirwa kweEtihad's Verified to Fly chirongwa ndechekuti vafambi vari kungogovana yavo data nendege pachayo, pasina wechitatu-bato kubatanidzwa.
John Wright, Mutevedzeri weMutungamiriri Wepasi rese MaAirport uye Network Mashandiro, Etihad Airways, yakati: "Verified to Fly yakaratidza kufarirwa zvakanyanya nevashanyi vedu, sezvo ivo vachiwana yekukurumidza track track kana vachitsvaga muairport kana vachishandisa Verified to Fly. Kubvisa basa rekufungidzira kubva mukuita, vashanyi vanokoshesawo vimbiso yekuti pavanosvika kunhandare yendege, vatosangana nezvose zvinodiwa neECVID zvekufamba.
"Tinotenda kuti idzi inguva dzakaoma kune vafambi uye ichi chave chinhu chakakosha kuita kuti nzendo dzevaenzi vedu dzireruke nepatinogona napo."
Vese vatyairi veEtihad vanokurudzirwa kushanyira Manage yangu Booking kuti vaendese magwaro avo. Kamwe iko kuendesa kwave kuongororwa neVakavimbika kuFly timu, vashanyi vanogashira 'yekubudirira' email kana zvinyorwa zvavo zvichizadzisa zvinodiwa nehurumende. Kana zvinodiwa zvikashaikwa kana kusasangana, muenzi anozokumbirwa kuendesazve kana kutarisa zvinyorwa zvavo.